Otu esi echekwa batrị na LG gị site na ime ọsịsọ Dormancy | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Batrị, LG, Nkuzi
N’isiokwu na-esonụ ma ọ bụ nkuzi bara uru, a ga m egosi gị a aghụghọ ma ọ bụ nhọrọ zoro ezo Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na ya ọrụ ọrụ nke LG G2 anyị, dị irè maka ụdị niile na ụdị dị iche iche, nke ga-enye anyị ohere chekwaa batrị 25% rụọ ọrụ otu nhọrọ akpọrọ Dormancy ngwa ngwa.
Nke a aghụghọ ma ọ bụ zoro ezo nhọrọ na anyị nwere ike rụọ ọrụ ozugbo menu ntọala zoro ezo nke LG anyị, ọ ga-ekwe omume n'ihi ọkwa nke onye otu Ogbe 69 de HTC Mania. Ya mere, ikike niile na ekele maka onye enyi ahụ e kwuru n'elu nke ntụle gam akporo na Spanish.
1 Ma gịnị bụ Fast Dormancy?
2 Enwere m ike ịgbalite nhọrọ a na LG m?
3 Ndị ọrụ dormancy na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ
4 Etu esi eme ngwa ngwa Dormancy na LG m?
Ma gịnị bụ Fast Dormancy?
Enweghị ịbanye na nkọwapụta teknụzụ nke ọtụtụ ndị ọrụ agaghị aghọta, gụnyere m. Na Dormancy ngwa ngwa bụ teknụzụ ọhụụ ma ọ bụ usoro njikọ na ntanetị data nke onye ọrụ anyị, kachasị nke mere na ọ na-erepịakwa ọtụtụ akụrụngwa na batrị na-azọpụta nke gam akporo anyị.
Fast Dormancy ihe ọ na-eme bụ tinye n'ime torpor na-enweghị gbanyụọ netwọk data nke ọdụ anyịl, na nke a na ị nwere ike ichekwa ruo 25% nke batrị na-abụghị obere feat. Na-enweghị Fast Dormancy arụ ọrụ, ekwentị anyị na-ezigara onye ọrụ ahụ ozi 30 ozi iji mara ma ọ ga-arụ ọrụ njikọ data ma ọ bụ na ọ bụghị, na nhọrọ ọhụrụ a, kama ozi 30, naanị ozi 12 ga-adị mkpa iji rụọ otu ihe ahụ rụọ ọrụ dịka nhọrọ ochie, na mgbakwunye, na nhọrọ ọhụrụ a, akara ahụ na-ehi ụra na ọsọ nke ozi 12 na ntanetị na-ezigara ha mgbe achọrọ ka ọ rụọ ọrụ 100%. Ekwuru m ọgbaghara nke bọọlụ atọ.
Enwere m ike ịgbalite nhọrọ a na LG m?
Agbalịrị m ya n'onwe m na ọdụ m LG G2 na LG G3 na eziokwu bụ na oriri batrị belata nke ukwuuAmaghị m ma ọ bụrụ na ọ gabiga oke nke 25% akpọrọ ebe a, mana ọ kwesịrị ịdị gburugburu pasent ahụ ebe ọ bụ na ịchekwa batrị site na aghụghọ a dị mfe karịa ụbọchị mbụ ejiri.
Ihe nkuzi a gbadoro ụkwụ maka LG G2 na LG G3 na ụdị ya dị iche iche ma ọ bụ ụdị dị iche iche dị ugbu a, agbanyeghị o yikarịrị ka ọ ga-arụkwa ọrụ na njedebe ndị ọzọ karịa ụlọ ọrụ South KoreaNaanị site na itinye koodu m kọwapụtara n'okpuru, ị nwere ike ịlele ya ozugbo na ụdị LG ndị ọzọ wee kọọrọ anyị site na nkwupụta gị ma ọ bụrụ na nke a bụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Naanị ihe anyị ga-enyocha, tupu ịmalite ọrụ ngwa ngwa site na nchịkọta ọrụ nke LG anyị, ọ bụrụ na onye ọrụ anyị na-akwado usoro njikọ data ọhụrụ a.
Ndị ọrụ dormancy na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ
Na ụkpụrụ, ngwa ngwa Dormancy dị na mpaghara Spanish maka ndị na-ahụ maka ekwentị mkpanaaka Movistar, Orange y Vodafone nwee nkwado maka Fast Dormancy, Maka ndị na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ MVNOs, anyị ga-achọta naanị Simio. Ndị ọzọ niile, n'oge a anaghị akwado ụdị teknụzụ a, yabụ anwala ịgbalite ya n'ihi na ọ ga - ebute mmetụta na - abụghị nke onye chọrọ ebe a, ya bụ, a ga - etinye usoro batrị batrị gam akporo gị.
Etu esi eme ngwa ngwa Dormancy na LG m?
Mee ọsịsọ Dormancy na LG Ọ dị mfe dịka ịmepe akara nke ọdụ anyị na ajụjụ ma kaa akara koodu ndị a: 3845 # * LG nlereanya #Yabụ, maka LG G2 nlereanya 802 koodu iji nweta ọrụ nchịkọta zoro ezo ga-abụ nke a: 3845 # * 802 #
Ozugbo etinyere koodu ahụ, ihuenyo dị ka ihe ndị a:
Anyị na-aga nhọrọ Settings na n'ime anyị na-achọ ma nweta nhọrọ Dkpụrụ FastDormancy:
Anyị na-eme ya site na ịpị Kwado:
Anyị bidogharịa ọnụ:
Anyị ga-atọrịrị ụtọ a bukwanu batrị echekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Otu esi echekwa batrị na LG G2 gị, na-eme ka nhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa, dị irè maka ụdị na ụdị niile
Ndewo, agbaliri m ya ma batrị na-agbapụ ngwa ngwa. Lg G2 na 7Rom. ekele
Kedu onye ọrụ sitere na? Ejiri m Rom Optimus RS rụọ ọrụ ya na LG G2 ma ahụrụ m mmụba dị ukwuu.
Ndewo Francisco Ruiz, enwere m lgg2 mini d618, ana m abanye na nchịkọta nhọrọ zoro ezo ka ịgbanwee na wcdma naanị ... ọ na-atụba m ozi MHIL. Achọrọ m ịgbanwe ya n'ihi na 3g ọ na-arụ ọrụ dị nwayọ maka m
hello Francisco ezigbo mgbede, enwere ike ịgbalite ya na nexus 4 ?? Ana m anwale ya, etinye m 960 na ụdị LG ma ọ naghị arụ ọrụ.
Echere m na ụdị Nexus ga-eji koodu ịnweta menu dị iche iche karịa njedebe LG.
Ọ ga - ekwe omume na onye ọrụ telcel?
Nke ahụ kwesiri ịrịọ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụrụ na ha arụ ọrụ ahụ ma ọ bụ mee ọchụchọ Google.
Ndewo enyi, olee otu m ga-esi gbanwee mgbanwe m mere, ya bụ, kwụsị ọrụ m rụụrụ ọrụ? n'ihi na ọnọdụ izizi bụ "amaghi" ma edobe m ya ka ọ "gbanye", ebe m hụrụ na ọ na - eji batrị ọzọ agbasoro m otu usoro ahụ mana etinye m "gbanyụọ" ... ugbu a ọ na - eji batrị ọzọ site na itinye nke ọ bụla n'ime nhọrọ abụọ ahụ . Biko nyere aka
Site na nrụpụta ụlọ nrụpụta ịkwesịrị ịnwe karịa oke.
Na-arụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa ka data ahụ na-anọgide ngwa ngwa ka ọ bụ na 4G anaghị agba ọsọ?
Enweghị m ike ịbanye na menu zoro ezo na koodu m nwere lg g2 vs980 verizon, kedu ka m ga-esi mee ya?
Enweghị m ike ịchọta menu m nwere sprint ls980, biko nyere aka
M ka nwere lg g2 vs980 mbụ na verizon mana enweghị m ike ịnweta menu akpọtụrụ aha ,,, ekele
Ọ dị onye nwere ike ịnweta menu dị n'ime nke Verizon zLG G2 vs980?
Nakwa na LG G2 vs980 si Verizon
Can nwere ike inyere m aka n'ịchekwa batrị? Enwere m LG g2 vs980 na mgbe m banyere koodu 3845 # * 980 # ọ na-agwa m koodu ahụ anaghị emetụta ma ọ bụ na-ezighi ezi, onye ọrụ m bụ Claro Honduras, sel m si Verizon
Ọtụtụ ndị ọrụ na-akọ nsogbu na Moto 360 ihuenyo